Fotoam-pivavahana Fifohazana / Célébration, 15 juillet 2018, 15:00, Ecublens (VD)
Faly manasa anao amin’ny fiaraha-mivavaka FKMSM ny Alahady 15 Jolay ho avy izao, @ 3 ora tolakandro.
Fotoana ahafahana mandray Asa sy Fampaherezana.
Aorianan’ny fotoana dia hiaraka finale Coupe du monde isika.
Faly indray hifankahita aminao!
Dimanche 15 juillet 2018 @ 15h > Temple d’Ecublens
Faly manasa anao amin'ny fiaraha-mivavaka FKMSM ny Alahady 15 Jolay ho avy izao, @ 3 ora tolakandro.Fotoana ahafahana mandray Asa sy Fampaherezana.Place du Motty 1 1024 EcublensFaly indray hifankahita aminao!
Gepostet von Ag Enda am Mittwoch, 11. Juli 2018
fifohazana, foot, juillet